जापानमा विभिन्न भिषामा भइराखेको समस्याहरु: PART 1 - ネパ-ル人のサイト (नेपालीहरूको वेबसाइट)
सर्बप्रथम त जापानको भिषा र यसमा भएका समस्या हरूको बारेमा छोटो जानाकारी:
१. विध्यार्थी भिषामा आउनेहरुको समस्या:
नेपालमा हाल च्याऊ उम्रेझै गल्ली गल्लीमा खुलेका कनसल्टेन्सीहरूले दिने झुटो सुचना ले गर्दा बिधार्थीहरूलाई निकै भ्रम परेको छ । जापानमा आउँने बिधार्थीहरू लाई प्रायजसो कन्सलटेन्सीहरूले निकै प्रलोभन देखाउछन । महिनामा २, ३ लाख कमाउन सकिन्छ । नियमले २८ घण्टा हो तर २, ३ ठाउँमा २८,२८ घण्टा गरी काम गरेमा केही समस्या पर्दैन। यसरी काम गरी महिनाको २ देखि ३ लाख सजिलै कमाउन सकिन्छ इत्यादि भनी बिधार्थीहरूलाई प्रलोभन देखाउछन। यस्ता झूटाआश्वासनदिईविधार्थीजम्मागर्छन।अनि त्यो बिधार्थी जापानको भाषा स्कूललाई १ बर्षको स्कूल फी र होस्टलको फि गरी १२ देखि १५ लाख सम्म तिरेर आउछ भने स्कूल अनुसार ६ महिनाको मात्र फि तिरेर आउने बिधार्थी पनि छन । जे भएनि जापानको ठाउँ अनुसार स्कूलको फि र होस्टलको फि गरी महिनाको नेपाली १ लाख देखी १ लाख ५० हजार सम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ । यो रकम भनेको होस्टल शेयर गरेर बस्दा को रकम हो । खाना को त अझ अलगै छदैछ । यति पैसा तिरे पछि १ बर्ष वा डेड बर्षको भिषा पाउँछ । जापानमा त आउँछ तर यहाँ आएपछि बिभिन्न समस्याले एकैचोटी घेरेर उसको दु:ख को दिन गन्न शुरू हुन्छ । कन्सलटेन्सीले बोलेका मीठा शब्दहरू उसले केहि पनि पाउँदैन , न त सजिलै काम पाइन्छ , न त बोलेको भाषा नै बुझिन्छ । नबस्ने र खाने ठाउँको सहजता छ न कसैले दया माया गर्छन अनि भन्न थाल्छ बेकार मा आएछु । बल्ल बल्ल गरी हप्ताको २८ घण्टा काम त यताउता गरेर दुनियालाई पुकारी ढिलो चाँढो पाउँला त्यतिले त उसलाई २ छाक खान पनि पुग्दैन , अनि कसरी घर भाडा दिने कसरी नेपालमा रिण गरेर आएको रिण फर्काउने !!
छोरा जापान पुगेको दिन बाट नेपालमा भएको परिवार ले कम्तीमा पनि महिनाको १ लाख पठाउँछ भनी आशा गरी बसेको हुन्छ । अनि कसरी पठाउने पैसा !! त्यसपछी त्यो बिधार्थी जे सुकै होस आएको रिण त उठाएर जानु पर्यो भनी जे पर्ला पर्ला , भनेर नियम बिपरित ओभर वर्क गर्ने निर्णय गर्छ र अर्को २८ घण्टाको काम खोजिदिन दुनियालाई गुहार्छ । भरसक चिनजानका साथीभाईलाई पुकार्छ तर अन्तिम परेमा दलाल लाई पैसा दिएर भएनि काम खोजिदिन भन्छ । जापानमा पैसा लिएर काम खोजीदिने नेपाली दलालहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन। फेरी ऊ अर्को ठगाइमा पर्छ काम खोज्दा पनि ठगीमा पर्छ । ४० , ५० हजार तिरेर भएनि अर्को काम खोजीदिनु भनी नेपाली दलाल लाई गुहार्छ र पैसा दिएपछि केही दिनमा काम पनि पाउँछ । पुलिसको निगरानीमा डराई डराई २ तिर काम गर्न थाले पछि अलि अलि बचाउँन शुरू गर्छ । तर अलि अलि गरी नखाइ नखाइ कमाएको पैसा नेपाल रिण तिर्न पठाउने कि फेरी स्कूललाई अर्को वर्ष तिर्ने फी जम्मा गरी राख्ने । ऊ दोधारमा पर्छ अनि फ्रस्टेशन हुन्छ उसलाई । नेपालमा आमाले पकाएको खाएको र थालमा चुठेर हिडेको बल्ल सम्झन थाल्छ । भिषा थप्नको लागि स्कूलमा हाँजीरी पनि पुर्याउनु पर्छ र स्कूलको फि पनि पुरै तिर्नु पर्ने हुन्छ । कमाउने आश लिएर आएको बिधार्थी, भिषा धान्नको लागि स्कूलको फि तिर्न , कोठा खर्च र आफ्नो खर्च पुर्याउन धौ धौ स्थितिमै रलमलाईरहेको हुन्छ । अनि केहि गर्न नसकेर फ्रसटेशन भई कुलतमा फस्ने र आत्महत्या गर्ने गरेका घटना धेरै छन । त्यसैले नेपालबाट कसैका बाबुआमाले छोराछोरीलाई जापान पढ्न पठाउनु हुन्छ भने छोराछोरीले पढिन्जेल लाई पुग्ने पैसा पुर्याउन सक्ने स्थिती भए मात्र पठाउनु पर्ने स्थिती देखिएको छ । जापानमा पढ्न आएका छोरा-छोरी ले पढने बेलामा आफ्नो खर्च पुर्याउन सक्नु भनेको नै ठूलो कुरा हो । तर नियम मानेर काम गर्दा कुनै पनि बिधार्थीले जापानमा पढ्ने खर्च आफैले पुर्याउन सक्दैन । यो कुरालाई बिचार गरेर मात्र आफ्ना सपनाका टुक्राहरूलाई जापान पठाउनु होला ।
२. कुक भिषामा आउने हरूको समस्या:
जापानमा आउने ८० प्रतिशत भन्दा बढी नक्कली कुक छन । नेपालमा यूनिभर्सिटी सकेर बसेका, शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य कृषि तथा ब्यापार गरी बसेका बिभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू नेपालको कुनै एउटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट बाट नक्कली प्रमाण पत्र बनाई १० बर्ष काम गरेको अनुभब देखाइ कुक भिषामा दलाल लाई १२ देखि १५ लाख तिरेर जापान भित्रने गर्छन । उनीहरूलाई दलालले बिभिन्न प्रलोभन देखाई जापान पठाउने(बोलाउने) गर्छ । तर यहाँ बोलाउने रेष्टुरेष्ट मालिक ले उसलाई काम नदिने शर्त हो भन्छ । यसमा सबैलाई त भन्न मिल्दैन । राम्रो नियतले कुक बोलाउने रेष्टुरेण्ट पनि छन तर प्राय; जसो मान्छे बोलाउने उदेश्यले खोलिएका रेष्टुरेष्टकामालिकले मान्छे ल्याएर काम नै दिँदैन र काम दिइहाल्यो भने पनि महिनाको ५० हजार देखि १ लाख सम्म भन्दा तलब दिँदैन । त्यो १ लाख भनेको कोठा खर्च नै ठिकै हुन्छ । अनि कुक ले सोध्छ कसरी रिण तिर्ने साहुजी भनी । साहुजीको उत्तर हुन्छ । बुढी बोलाऊ बुढीले २,३ ठाउमा काम गरी कमाउँछिन अनि के को चिन्ता!!!!! । तर बिचरा कुक लाई थाहा हुँदैन की श्रीमतीले २८ घण्टा भन्दा बढी काम गरिन भने जापानको कानुन बिपरित हुन्छ । फेरी श्रीमती बोलाउनको लागि डकुमेन्ट खर्च भनी साहुलाई पैसा दिई श्रीमती बोलाउँछ । तर श्रीमती आएसी सेयर गरी बसेको कोठामा बस्न मिल्दैन अनि फेरी ६,७ लाख रिण गरी कोठा भाडामा लिएर गास बास को ब्यबस्था मिलाउँछ। अनि भन्छ म भिषा धान्छु बुढी तिमी २,३ ठाउँमा काम गरेर पैसा कमाऊ ।
जापानको नियम- कानुन अनुसार जुन कम्पनिमा आएको हो त्यो कम्पनि मा भन्दा बाहिर काम गर्न पाउँदैन । यदि एउटा कम्पनी बाट अर्को कम्पनीमा सर्न चाहन्छ भने त्यसको प्रोसेस इमिग्रेशन मार्फत गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै उदाहरणको लागि काम छोडेको पत्र ( थाइस्योकू स्योमेइस्यो ) र नयाँ जाने कम्पनीले दिने काम दिएको पत्र (जाइस्योकु स्योउमेइस्यो ) लिएर इमिग्रेशनमा गइ प्रोसेस गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि कसैले यो प्रोसेस गरेन भने त्यो पनि अबैधानिक हुन्छ । प्राय: नेपालीले त्यो गरेको पाइँदैन ।
यस्तो हालत भएका कारण कुक भिषामा जापानमा आउने एउटा कुकले आउने बेलामा तिरेको पैसा कहिले तिर्ने , के खाने ? र कसरी रिण तिर्ने ?? नेपालमा पनि प्रायजसो रिण नै गरेर आएको हुन्छ । भिषा हुन्छ जम्मा १ बर्षको कमाई न समाई फेरी १ बर्षमा भिषा थप्ने बेलामा साहुले भिषा एक्सटेन्सन भनी अरू २,३ लाख माग्छ । अनि कहाँबाट दिने फेरी २,३ लाख तर श्रीमती बोलाइदिन्छु भनेर साहुले आश्वासन दिन्छ र लुरुक्क परी फेरी साहुलाई २,३ लाख तिरी भिषा थप्छ । तर श्रीमती ल्याएपछि न ५,६ जना मिलेर बस्ने साहुले खोजीदिएको स्टाफ कोठामा श्रीमती राख्न सक्छ न आफैले कोठा लिन सक्छ। जापानमा कोठा लिन पनि त्यति सजिलो कहाँ पो हुन्छ र ! कोठा भाडामा लिन पनि ग्यारेन्टर देखि लिएर बिभिन्न खर्च गरी सस्तोमा पनि ४,५ लाख लाग्छ । यसरी सम्स्या माथी समस्यामा परी मुटुमाथी ढुङगा राखी जापान मा नियम एउटा कुकले जीवन बिताएको हुन्छ ।
जापानमा विभिन्न भिषामा भइराखेको समस्याहरु: ....(Part 2) को लागि: http://8n8np.com/article/1736
2018-03-29 Add comment
Upcoming Events: 2018-03-29 10:56